Intsholongwane ye-corona ('i-Wuhan virus') igutyungelwe yipatent yesiNgesi: inombolo ye-EP3172319B1: UMartin Vrijland
Intsholongwane ye-corona evele ngequbuliso eTshayina kwingingqi yase Wuhan kwaye kuthiwa yaqala kwintengiso yezilwanyana igqunywe yilungelo elilodwa lesiNgesi. Le yinombolo yelungelo elilodwa lomenzi EP3172319B1 iphuhliswe ngu U-Erica Bickerton kuyo Iziko lePirbright eSurrey, eNgilani. IZiko lePirbright (IBhili kunye neMilinda Gates) yenza uphando kwizifo ezosulelayo kwizilwanyana zasezifama.
Kuyamangalisa ukuba kwenzeke ukuba kugqitywe ukuba intsholongwane igqithile kwintengiso kwingingqi yase China Wuhan, ngelixa kungaziwa ukuba zeziphi izilwanyana. Emva kwayo yonke loo nto, umntu obezise izilwanyana ezivenkileni kufuneka agule okungenani.
Ungacinga ukuba ayifanelanga ukuba yinkimbinkimbi yokufumana umthombo; Ngaphandle kokuba yiPsyOOp (ukusebenza kwengqondo kwaye ke neflegi yobuxoki). Ewe, ukuba ngaba ipatent yeyelabhoratri yesiNgesi, zigcina njani ezi zilwanyana kwintengiso yaseTshayina? Nangona kusithiwa inokuba intsholongwane eguqulweyo, umbuzo omkhulu usala wokuba yaphela njani intsholongwane eTshayina.
Umbuzo wesibini ophakamayo kukuba umntu angazi njani ukuba yintsholongwane eguqulweyo? Oku kunokwaziwa kuphela ukuba iisampulu zegazi zithathwe kwizigulana ezosulelweyo kwaye zichazwe kwimfuza. Oko kubonakala kum kumcimbi weeyure ezimbalwa zomsebenzi nezixhobo zophando zanamhlanje.
Ayisiyo ukuba imaphu ye-DNA isesencinci. Inzululwazi kude kube ngoku, ukuba kusetyenziswa indlela yeCRISP-CAS12, iDNA inokufundwa kwaye iguqulwe ukude (bona le ngcaciso). Ungalindela ke ukuba wazi eyona nto kwaye malunga neempawu zenguqu zentsholongwane. Ngokwenyani akunakwenzeka ukuba abantu bangaqapheleki ngqo kwiimpawu zentsholongwane. Ukuba intsholongwane iyatshintsha, oko kuthetha ukuba ibenexesha elithile lokufumana ologuquko.
Ngoku intsholongwane ye-corona iphuhlisiwe kwilebhu yesiNgesi esekwe kuhlalutyo olusulungekileyo lwemfuzo yesifo ekufuneka ilwe njengesitofu sokugonya. Intsholongwane ye-corona yakhiwa njengesitofu sokugonya isifo (funda ipatent yenkcazo). Oku kuthetha ukuba nokuba iyeza isitofu sokugonyela intsholongwane yabemi e-China okanye umhambi owakhe wanikwa iyeza lokuthintela (kwaye abanye bosulelwe yintsholongwane kagonyo).
UPHANTSI 16:00:XNUMX Intsholongwane ye-corona ibonakala njengeyeza lokugonya iphuhliswe ngokuthe ngqo i-bronchitis kwinkukhu intsholongwane yeentsholongwane (IBV). Oko kuthetha ukuba kufuneka igonyelwe inkukhu ngqo kwaye ingabi ebantwini. Umbuzo ngoku kwenzeka njani ukuba ukudluliselwa ebantwini kwenzeke njani. Owona mbuzo ubaluleke ngakumbi, nangona kunjalo, yindlela intsholongwane eyenziwe ngayo elabhoratri inokuthi iguquke kwaye luyintoni ukusetyenziswa kwezitofu zogonyo, ukuba zingqineke ziyingozi ngakumbi kunengxaki leyo ziphuhliselwe kuyo. Kwaye kwenzeka ntoni xa abantu besitya iinkukhu okanye amaqanda kwezi zinkukhu; inkukhu ekubetheleni isitofu sokugonya esivele ngoku siguqulwe (mhlawumbi kukusebenza kwengqondo).
Yam nqaku elandelayo Ndicacisa ukuba zininzi iintsholongwane zekorona, kodwa ukuba olu qhushumbo alubhekiseli kwi-SARS okanye kwi-MERS. Kuzo zonke iimeko kusebenza ukuba ukuguqulwa kweelabhoratri kuphuhliswa ziintsholongwane ezinelungelo elilodwa lomenzi. I Ukujonga inyani ulibale ukukhankanya oko ukwenzela ukuba kube lula. Kungenxa yokuba i-SARS okanye i-MERS ayikhankanywa apha, intsholongwane yesiNgesi enelungelo elilodwa lomalungelo kubonakala ngathi yimvelaphi yentsholongwane ye-corona. Ifani "corona" ibhekisa kuwo onke iimeko iilabhoratri eziphuhlisiweyo kunye neentsholongwane zokugonya ezinelungelo elilodwa lomenzi. "Uguquko oluzenzekelayo" alunalungelo elilodwa lomenzi. Okwangoku, ingcali yentsholongwane yaseTshayina ibhekiswa kuyo kwaye ishushumbisa intsholongwane kuxoxwa ngayo (jonga apha).
Nokuba ungaqhela kanjani, oku kuthetha ukuba intsholongwane yogonyo sisiseko sosulelo. Into yokuba le ntsholongwane kuthiwa iguqukele ekubeni yintsholongwane eyingozi kwaye ibulala isathetha ukuba kukutshintsha kwentsholongwane (elenziwe elebhu elenziwe elenziwa elenziwe emzimbeni wakho) hayi ukutshintsha kwentsholongwane.
Ngaba ayisosizathu sako sokuthandabuza uphuhliso lwezitofu zokugonya? Emva kwayo yonke loo nto, izitofu zokugonya intsholongwane eyakhelwe elabhoratri ekufuneka ithintele ukuqhuma kwesifo esaziwayo. Ngamafutshane: intsholongwane eyakhiwa kwilabhoratri njenge-anti-virus (vaccine) ngumba wokuqhambuka kwentsholongwane kaWuhan; apho intsholongwane yogonyo iye yaguqukela ekubeni yingozi.
Ngokoluvo lwam sisebenzisana nathi apha ngePsychological Operation (PsyOp) ekufuneka ikhokelele kuxanduva lokugonywa kwihlabathi liphela. Oko ngokwawo kungumba ongxamisekileyo kwi-UN, kuba i-UN kunye neCawa yamaKatolika yeyona nto iphambili iqhuba emva kolungelelwaniso kunye nokudluliselwa komntu (i-hermaphrodite-cyborg yabantu). Kwaye ukuze uqonde ukuba, wonke umntu uyayidinga iDNA kwaye wonke umfana ozelwe kufuneka afumane isitofu esikhulayo kwisibeleko esibhinqileyo (kwisilwanyana okanye emntwini) kwaye kuyo yonke intombazana isitofu sokugonyelwa isisu esikhutshiwe Isibeleko siyazalwa. Abantu bafuna ukukwazi ukufaka i-enzyme ebuntwini abanokuthi baqhubeke nayo i-genetic modified yabantu kwi-intanethi (ngokusebenzisa inethiwekhi ye-5G).
Ndicacisa ukuba iintsana ze-IVF kusenokwenzeka ukuba ziye zaba yi-hermaphrodite (bisexual) iminyaka emininzi eli nqaku. Kuyo ndiyacacisa ukuba le ambiguity ayisoloko kufuneka ibonakale ngokucacileyo emzimbeni.
Ndizicacisa ngokubaluleka kwemfuno ye enzyme eyenza uphando lweCRISPR-CAS12 nditshintshe ukusebenza kwinethiwekhi ye-5G eli nqaku.
Iinkcukacha eziphambili kukuba umyili wegciwane le-corona, U-Erica Bickerton ovela kuyo IZiko lePirbright, kunye neprotein ye-chimeric ephuhlisiwe esekwe kwintsholongwane ye-corona (bona apha). Oko kuthetha ukuba sinokwamkela isiphumo se-chimeric apha; Iziphumo ezifunekayo zokwenza iintsana ze-hermaphrodite, njengoko kuchaziwe kwinqaku malunga ne-IVF.
I-chimera (ekwabizwa ngokuba 'yi-chimeric') ayisiyonto yendalo. I-Chimism iveza ngokucacileyo nge-IVF ngendlela yophuhliso lwe-fermal hermaphrodite (bisexuality). Ungacinga ukuba ukufaka intsholongwane kwiintsana ezisanda kuzalwa kunefuthe elifanayo lokukhula. Ke kuyabonakala ukuba le PsyOp ayifihli i-ajenda ye-transgenderism ngokusebenzisa umphuhlisi wegciwane le-corona; kuba u-Erica Brighton ukwanguye umakhi weprotein ye-chimeric esekwe kwintsholongwane enye. Kutheni le nto ungathiya iprotheyini emva kwesiphumo sokwabelana ngesondo esibini esenzeka kwiintsana ze-IVF?
Funda amanqaku asezantsi ukuze uqonde, nawo uwafunde iimpendulo ngolwazi olongezelelweyo kwaye ufunde kananjalo kwaye ngakumbi incwadi yam, endichaza kuyo umfanekiso omkhulu. Ngokuthengwa kwencwadi le uyawuxhasa umsebenzi wam ukuze ndiqhubeke. Unokuba lilungu. Inkxaso yakho ifuneka ngokungxamisekileyo ebomini bam kunye neendleko zale webhusayithi.
Uludwe lwekhonkco lovimba: Zibelzoku.ac.uk, patents.google.com, patents.google.com, Zibelzoku.ac.uk, njn thescientist.com
Utshintsho olukhulu: UMartin Vrijland umele uluntu lwe-LGBTI!
Ngaba imfundo ye-LGBTI ekhethiweyo yesini yabantwana inesiseko sokubonakalisa kwendalo?
Injongo yangoLwesihlanu: indlela abantwana ezikolweni baxineke ngayo sisasazi se-LGBTI
Ngubani u-Erland Oscar Galjaard kwaye unokwenza ntoni kwi-eugenics?
tags: WaseMelika, Bickerton, ityala, isifo sengqondo, umqhele, coronavirus, Erica, Gates, iziko, i laboratory, Melinda, patent, I-Pirbright, IZiko lePirbright, VS, Wuhan, Intsholongwane kaWuhan
23 Januwari 2020 kwi-11: 40
I-Bill & Melinda Gates Foundation yimali yokuphuhliswa kwePirbright's Livestock Antibody Hub exhasa impilo yezilwanyana kunye neyomntu.
Abaphandi abavela kwiPirbright Institute banikwe i-US $ 5.5 yezigidi yi-Bill & Melinda Gates Foundation yokuseka iVenkile yokuHamba yeZilwanyana ejolise ekuphuculeni impilo yezilwanyana kunye noluntu jikelele. Inkqubo yokuzilangazelela yomsebenzi iya kubona intsebenziswano ebanzi phakathi kwemibutho emininzi yophando yase-UK ukuze isebenzise iziphumo zophando kwizifo zemfuyo kunye ne-immunology ukuxhasa impilo yabantu njengenxalenye ye-ajenda ye-'Mpilo enye. '
Oososayensi abakhokelayo abavela ePirbright bazakuthatha inxaxheba kule projekthi, kubandakanya uNjingalwazi uJohn Hammond, uNjingalwazi uVenugopal Ronald, uGqirha Simon Graham, uGqr Elma Tchilian, uNjingalwazi Munir Iqbal kunye UGqr Erica Bickerton. Ulwazi lwabo oluhlanganisiweyo lolwazi luya kuqhuba ukufundwa kweempendulo zeenkomo, iihagu kunye neenkukhu kwizisombululo eziphezulu zokwandisa ukuqonda kwethu ngokukhuseleka kokukhuselwa kwiintlobo ezinokuthi zisetyenziswe njengemodeli kuluhlu lwezifo ezosulelayo zoluntu.
23 Januwari 2020 kwi-16: 30
Ngokudibana? Unjingalwazi uJohn Hammond, noxanduva oluhlangeneyo kuphuhliso lonyango lwe-corona (intsholongwane), unomdla kakhulu kwisini. Indoda enobuchule obunjalo yenza ntoni kwiqela elikhulisa imigonyo yenkukhu? Ukudibanisa amachaphaza.
Ukwenza isini kwimfundo yePyotherapy:
Inkqubo yokugxeka okubalulekileyo ukuba ukuqonda njani abafundi
yakha izazisi zesini kwi-physiotherapy yamabanga aphantsi
Inkqubo e-United Kingdom
NguJohn A. HAMMOND BSc, MSc
Thesis ingeniswe ngokuzalisekiswa ngokuyinxenye kwe
Iimfuno zeYunivesithi yaseKingston ngokubambisana ne
IYunivesithi yaseRoehampton ye
Isidanga sikaGqirha wezemfundo
23 Januwari 2020 kwi-16: 33
Kwisiqwenga esabhalwa nguJohn Hammond:
“Njengomhlohli wonyango lomzimba
ejongene nale micimbi, injongo yolu phononongo kukuphonononga ukubaluleka kwe
Isini ekwakhiweni kwezazisi zabafundi. "
23 Januwari 2020 kwi-16: 50
Ukwenziwa kweeMasculinities (Ukuvuselela indlela): Izifundo zaMadoda aMatsha
23 Januwari 2020 kwi-16: 54
Rhoqo ngonyaka iphulo elitsha le-IWD liqala nge-8 Matshi. Umxholo wonyaka ka-2018 ngu #PressforProgress, a ukubiza-isenzo-ukuqhubela phambili ukulingana ngokwesini kunye nokulingana, ebalaseliswe kwiNgxelo yeZithuba eziSweleyo yeHlabathi yoBomi beHlabathi ye-2017.
Apha kwiPirbright Institute, sibhiyozela abasetyhini abaye baphumelela ngokumangalisayo kumashishini amnyama (STEM), isayensi, itekhnoloji, ubunjineli, imathematics. Unjingalwazi uHelen Sang, iZiko laseRoslin kunye noJudith Batchelar OBE, eSainburys batyelele iZiko namhlanje, bekhuthaza oogxa bethu ngeesemina nangeziganeko zenethiwekhi.
23 Januwari 2020 kwi-17: 02
UGqr. U-Elma Tchilian ubonakala ebandakanyeka kuphuhliso lwe-HPV yokuthintela ukungathathi hlangothi.
Ithini loo nto malunga nogonyo lwe-HPV? Ngaba oko kwenzelwe ukwenza ukuba abantwana bathathwe ngokwesini? Kwaye lenza ntoni eli nenekazi kwiqela elikhulisa imigonyo yenkukhu (kwaye yakha iprotein enegama legama elisetyenziselwa i-hermaphrodia)?
23 Januwari 2020 kwi-17: 04
Ngamafutshane, phantse lonke iqela eliphuhlise intsholongwane ye-corona yeziko lePirbright libonakala linento yokwenza nophuhliso lwesini / isini. Ixhaswe yiBill & Melinda Gates.
Ihamba phi enye imithombo yeendaba xa ithatha le ngxelo? Ukuxela ..
23 Januwari 2020 kwi-17: 17
Imithombo yeendaba ehlukileyo ilawulwa yinkcaso. Yenzelwe umfundi kuphela.
23 Januwari 2020 kwi-17: 21
@Martin, kufuneka ufunde eli nqaku ukususela ngo-2016. I-Netherlands njenge-hub kunye ne-Erasmus MC idlala indima ebalulekileyo kule nto:
NgoMgqibelo, nge-22 kaSeptemba, u-Ab Osterhaus, oyintloko kwelebhu yeViroscience e-Erasmus MC, ufumana umnxeba ovela eNgilani. Indoda yangeniswa kwisibhedlele sase London esivela eQatar ngendiza yabucala. Kuqhotyoshelwe ngokuthe ngqo ekuphefumleni kokufakelwa yedwa.
23 Januwari 2020 kwi-17: 22
24 Januwari 2020 kwi-00: 26
Ibali elihle lokumboza. Intsholongwane yaphuhliswa kwelebhu yesiNgesi ngokuchasene ne-bronchitis inkukhu.
25 Januwari 2020 kwi-14: 35
Ukucaca, ababandakanyekayo ngomphumo we-pirbright
Abathathi-nxaxheba bethu abaphambili ngaba:
I-Biotechnology kunye neBhunga leSayensi yezeBiology (BBSRC)
-UK iSebe Lemicimbi Yendalo, Ukutya Nemicimbi Yasemaphandleni (Defra)
-Wellcome Trust, iBhunga loPhando lwezoNyango (MRC) kunye nezinye iiarhente zophando
Inkxaso-mali yangaphakathi kunye neearhente zokulawula izifo, ezinjenge-OIE, WHO, iKomishini yaseYurophu, uBill kunye noMelinda Gates Foundation.
-Abavelisi bemilingo okanye ugonyo lwezilwanyana kunye ne-antivirals
-Iintshatsheli kunye nabagcini bemfuyo
24 Januwari 2020 kwi-01: 02
UBill Gates sele esazi nge-27 ka-Epreli ngo-2018 ukuba kuza kwenzeka ntoni:
Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Epreli ngo-27, ngo-2018: 3 PM
Isifo esilandelayo esibuhlungu esiya kubangela ubhubhane kwilizwe siyeza, uBill Gates uthe ngoLwesihlanu kwingxoxo zesa sifo. Asilungele. Isigulo esifana nobhubhane we-1918 umkhuhlane unokubulala abantu abazizigidi ezingama-30 kwisithuba seenyanga ezintandathu, utshilo uGates, esongeza ukuba isifo esilandelayo asisayi kuba ngumkhuhlane, kodwa into esingazange siyibone. Umhlaba kufuneka ulungiselele njengoko usenza emfazweni, utshilo uGates.
Enjani yona intle, laa Bill Gates! Ngokuqinisekileyo ii-Gates zikwangumboniso weskripthi. IMicrosoft yayingeyonkampani yephupha laseMelika, kodwa uGates waye (kanye njengo-Elon Musk ngoku) enye yeewindows ezaziteknoloji yavunyelwa ukuthengisa, ukuba abantu banokuxhoma kwiwebhu yolawulo.
Ngezigidigidi ezenziwe ngaloo nto, ngoku anganceda ukuseta umdlalo 'weNgxaki, ukuSabela, isiSombululo' ngokuphuma kwentsholongwane eyilelwe elebhu, ukwenzela ukuba kamva anikeze isisombululo esele sisekhelofini. Uxanduva lokugonywa kwihlabathi liphela, apho izitofu zokugonya ziya kuba nesixhobo esiya kunceda ukuzisa i-transhumanization kunye ne-transgenderisation (njengoko kuchaziwe kwinqaku lam kunye nonxibelelwano olungaphantsi).
23 Januwari 2020 kwi-11: 59
INetherlands nayo iyayenza kancinci
I-IB QX yintsholongwane egadalala yodwa okanye i-IBV. Ngamanye amaxesha yaziwa njenge "China QX" njengoko yaqalwa yodwa emva kokuqhambuka kwesifo kwingingqi yeQingdao e China phakathi kweminyaka yoo-1990. Ukusukela ngeli xesha intsholongwane iqalele eYurophu. Ukusukela ngo-2004, imiba eqatha yokuveliswa kwamaqanda ichongiwe inentsholongwane efanayo kwiinxalenye zaseNtshona Yurophu, ikakhulu eNetherlands, kodwa ikwathiwa ivela eJamani, eFrance, eBelgium, eDenmark nase-UK.
Intsholongwane esekwe kumatyala amaDatshi yachongwa liZiko loPhando laseDatshi eDeventer njengohlobo olutsha abalubiza ngokuba yi-D388. Unxibelelwano lwaseTshayina lwavela kuvavanyo olunye olubonisa ukuba le ntsholongwane yayiipesenti ezingama-99 ngokufanayo kwiintsholongwane zaseTshayina QX. Isithinteli sokugonyela i-QX esifana ne-QV njenge-VV ngoku sele siphuhlisiwe.
23 Januwari 2020 kwi-17: 35
I-Ban Ki Mon efanayo ilapha iphinda ishumayele i-doo porn ... Yonke into ibhekiswa ngabarhanelwa abaqhelekileyo ungavumeli eso sidenge!
(CNN) Umgwebo we-Doomsday wavuselelwa ngoLwesine ukuya kwimizuzwana eyi-100 ngaphambi kobusuku - esikufutshane kakhulu sakha sazaliseka ngokupheleleyo (ngoku, ubuncinci).
23 Januwari 2020 kwi-12: 23
Oku kulunga ngokugqibeleleyo kwi-ajenda ye-eugenics
I-Eugenics (/ juːˈdʒɛnɪks /; isuka kwisiGrike ikilὐγchasíής eugene 'ozalwe kakuhle' ukusuka ku-εὖ eu, 'ulungile, kakuhle' kunye no-genos, 'ubuhlanga, isitokhwe, i-kin')   yiseti yeenkolelo kunye nezenzo Injongo yokuphucula umgangatho wemfuza woluntu ngokuzalela okukhethiweyo
"IZiko lePirbright (iBill & Melinda Gates) lenza izifundo ngezifo ezosulelayo kwizilwanyana zasezifama."
Kukwayanyaniswa "nendlela" emasangweni abandakanyeka ngayo ngokusebenzisa iNetherlands kwizityalo eziguqulwe ngokwemvelo e-Afrika
UDe Deyn usebenzise abafowunelwa beWageningen ngale nto, kuba iBill & Melinda Gates Foundation ngumkhuseli wabucala wabucala wabaphandi beWageningen. Uye wanikezela nge-2 yezigidi zeedola kwiprojekthi yeN40Africa.
UBill Gates ubandakanyeka kwiiprojekthi ezimbalwa eziphambili kwiYunivesithi yaseWageningen ngesiseko sakhe.
23 Januwari 2020 kwi-21: 39
Silungiselele Njani Ukulungiselela Ubhubhane olandelayo? Hayi kakhulu, Iingcali zibonisa
Kuza kwenzeka ntoni xa umkhuhlane wentsholongwane ongalindelekanga, okanye i-SARS, okanye isifo X - naluphi na olunye usulelo olusulelayo lwentsholongwane - lusasazeka emhlabeni jikelele lubangela ubhubhane?
Le yeminye yemibuzo ejongene neenkokeli zelizwe jikelele kwimpilo yoluntu, kumzi-mveliso, nakurhulumente kwimisebenzi yokulungiselela ubhubhane ebizwa ngokuba ngumsitho wama-201. Isiseko seMelinda Gates. <-
Iingcaphephe ziqhutywa ngocoselelo olwenziwe ngononophelo, isifo esiqingqiweyo okanye isigulo esitsha (esentsomi) esibizwa ngokuba yiCAPS okanye isifo se-corona virus acute pulmonary syndrome. Imodareyithwe emva kweentlekele zangaphambili ezinje nge-SARS kunye ne-MERS.
Kuthini na kuBill bores wena kancinci?
23 Januwari 2020 kwi-21: 45
yep 100% ukuba oku kukuseta, bhala inqaku kwinyanga ephelileyo malunga nokuba kuqhubeka ntoni kanye kanye. I-Voltreffer Salmon thx, iya em deln!
23 Januwari 2020 kwi-21: 54
kanye ngenyanga emva kokubhalwa kwenqaku leForbes
Iimpawu zokuqala ezaziwa njenge-Wuhan Pneumonia. I-12, Abaphathi bathi
Inani labantu abosulelwe yinyumonia engaqondakaliyo eWuhan inyuke yaya kuma-59, abaguli bokuqala babonisa iimpawu ekuqaleni kukaDisemba. I-12, ikhomishini yezempilo edolophini ibhengeze I-Cawa. Nangona intsholongwane ingekachongwa, izizathu ezininzi - kubandakanya i-SARS, njengoko uninzi elizweni besoyikisa - sele ikhutshiwe.
24 Januwari 2020 kwi-00: 52
bona inqaku leForbes inqaku, umxhasi weForum yeHlabathi yezoqoqosho. Beziphi iinkokheli zopolitiko ezazibizwa kulo nyaka e-Davos (WEF)?
24 Januwari 2020 kwi-17: 55
Usuku ngaphambi kokuqhambuka:
Isigulana sokuqala nge-12 kaDisemba ngo-2019 sabizwa ngokuba yi "Zero"
Usuku emva kokuqhambuka:
Abandidanisi, yenza le nto ufuna ngayo. Ndingabelana ngale lwazi!
24 Januwari 2020 kwi-18: 49
NgoDisemba 13 Inoveli Corona intsholongwane, ngoko ke umahluko
"Inoveli ethile kwizifo ezosulelayo yenzekile kwaye, njengotshintsho olukhulu, ayiyongxabano."
23 Januwari 2020 kwi-12: 47
Enjani inkcazo entle abayifumeneyo !! Kodwa la malulwane ayifumana njani le ntsholongwane eyaphuhliswayo elebhu yesiNgesi?
Ukuqiniseka ukuba, andiphindi ndisele ibhiya yaseCorona.
23 Januwari 2020 kwi-12: 49
Ewe, ngumgodi omkhulu wenyoka ...
23 Januwari 2020 kwi-13: 26
UBrandon uthi ingasetyenziswa njengesigqubuthelo sengxaki yemali ezayo, ndiyavuma.
Nokuba le ntsholongwane ayinabungozi njengoko yenziwa ukuba ivele kumajelo osasazo, iflegi ebubuvuvu enokusetyenziselwa ukoyikisa uluntu ukuba lusebenzise ulawulo-mthetho olufana nemfazwe kwaye inokusetyenziselwa ukukhusela uqoqosho oluqhubekayo. ukuqhekeka. "
25 Januwari 2020 kwi-00: 31
Ndiyoyika ukuba sisuka ebhubhaneni sisiya kubhubhane
https://www.rtlnieuws.nl/economie/video/4994801/een-echte-pandemie-kost-biljoenen-euros isiciko esihle kunjalo 😉
23 Januwari 2020 kwi-15: 48
Kwenzeka njani ukuba ndingaboni amanani amaxesha elinqaku elinjalo elabiwe ngayo kwizibalo zam (ngendlela yabatyeleli abangakumbi)? Oko kunokukhomba kwinto enye kuphela: I-Facebook ayibonisi imiyalezo ekwabelwana ngayo kubahlobo babantu ababelana umyalezo. Uvavanyo olunzima.
23 Januwari 2020 kwi-16: 29
Ewe, i-Facebook, iGoogle njl njl, izixhobo zeenkonzo zokhuseleko Cia, mi6, mossad, aivd enzenz.
Zintloni ukuba oku akusamkelwa ngabantu abaqhelekileyo.
Inyaniso eninzi kakhulu ayilunganga impilo, ubuncinci kwimpilo yamakhwenkwe eskripthi, ilizwe laphakade liyaphucuka. Ihlala ihlazo.
23 Januwari 2020 kwi-16: 43
Oku kukwenza ukuba ucinge:
Izazinzulu Zilungiselela iflu yentaka ebulalayo, cinga ngokukhupha iziphumo eziyimfuneko ukuze wakhe i-Bioweapon
NOVEMBA 21, 2011
Kuvakala ngathi yinto ephuma kwincwadi eyintsomi eyinqabileyo yesayensi, kodwa izazinzulu ziyikhusele intsholongwane yeH5N1 yeflaya, kwaye ziqwalasele ukukhulula uphando.
Oluvavanyo, olwalubandakanya ukuguqula intsholongwane kangangezihlandlo ezi-5, lwenza uxinzelelo lwasuleleka kakhulu phakathi kobucekeceke- owona mzekelo wesilwanyana osetyenziselwa ukufunda usulelo lomkhuhlane woluntu.
Ukuza kuthi ga ngoku akukho ncwadi yezenzululwazi epapashe iziphumo, kwaye u-Inglesby unethemba lokuba akukho nanye kuzo. Ugqirha ongu-Ron Fouchier we-Erasmus Medical Centre eNetherlands unoxanduva lokusebenzisa izixhobo ngentsholongwane kwaye azise iziphumo kwiqhawe lenkomfa yomkhuhlane eMalta.
Uphi uRon Fouchier?
23 Januwari 2020 kwi-17: 10
Iyayibetha indlela uZalm eyayiqeshe uMarion Koopmans ka-Erasmus MC, oku kubonakala ngathi akusayi kuba yinto eyenzekayo xa ufunda inqaku elingentla.
23 Januwari 2020 kwi-17: 23
Hayi ukuhlangana, ngokucacileyo ipateni!
8 Februwari 2020 kwi-19: 38
@Riffian, iso leenkunzi zeenkomo ekubuyiselweni kweNetherlands ngoRon Fouchier (kwi) ubandakanyeka ngqo!
the "ngengozi" efileyo ziqala ukwenza iintloko 😉
Ngaba uNjingalwazi waseCanada kwiZiko okanye kwiTshayina ye-Bio-Espionage yaseTshayina eFihliweyo yaFa e-Afrika?
I-infact, njengoko iGreatGameIndia inike ingxelo kwingxelo yethu ekhethekileyo ngeCoronavirus Bioweapon, njengoMlawuli wezeNzululwazi uFrank Plummer ngoyena ufumana isampulu ye-SARS Coronavirus yesigulana sase-Saudi kwi-NML Winnipeg Lab evela eRon Fouchier, ugqirha ophambili kwizifo i-Erasmus Medical Center (EMC) ) eRotterdam, eNetherlands owathunyelwa le ntsholongwane ngugqirha waseJamani U-Ali Mohamed Zaki owathi wahlula kwaye wachonga uhlobo lwangaphambili lwentsholongwane ka-Corona eyayingaziwa kwimiphunga yesigulana yase-Saudi.
UFouchier walanda intsholongwane kwisampulu ethunyelwe nguZaki esebenzisa i-virus eyaziwa ngokuba yi "pan-corona virus" yeyona nkqubo yexesha lokwenyani ye-polymerase chain reaction (RT-PCR) indlela yokuvavanya ukwahlula iimpawu okanye inani leentsholongwane ezaziwayo zekrona ezosulela abantu.
I-White House inesizathu esivakalayo sokuthandabuza ibali elisemthethweni njengesazi sebhayoloji esivelayo. UJames Lyons-Weiler weZiko leSulungekileyo kwaye waSebenzisa ulwazi, wabonakalisa kwaye wachaza indlela ukulandelelana kwentsholongwane ye-corona - ekhutshelwe esidlangalaleni yiChina - inesicatshulwa "esiphakathi" esifaka i-SARS (isifo esibuhlungu kakhulu sokuphefumla). ubonakala, ngokokuhlalutya kwakhe genomic, ukuba ufakwe kwintsholongwane ka-2019-nCoV usebenzisa itekhnoloji "pShuttle". Obu buchule bunokwenziwa kuphela kwilebhu, kuba ayikaze yenzeke ngokwendalo.
"Le ayisiyo ithiyori yecebo, yingcali yesayensi, yezonyango, utshilo uDel Bigtree, umvelisi ophumelele i-Emmy kunye nomseki we-Consent Action Consented Network (ICAN).
"Isiseko sayo sisekwe kwisayensi yesandi, uludwe lwengqondo, kunye nophando, kwaye eyona nto iphambili kwimithombo yeendaba kufuneka ibuzwe ukuba ngaba izakulandela eli khonkco kwi-SARS endaweni yokuzama ukucekisa nabani na ozama ukulandela inyani ngenzululwazi.
23 Januwari 2020 kwi-21: 04
Wamkelekile kumzi mveliso wokulinga
23 Januwari 2020 kwi-22: 41
I-Coronavirus eyahlukileyo ebantwini
Into enomdla kukuba imeko yelungelo elilodwa lomenzi:
Ubume besicelo bugqityiwe- Umrhumo unxulumene
24 Januwari 2020 kwi-00: 43
Inxalenye enomdla yale siqwenga nayo:
ICoronavirus ngaphambili ibingaziwa ukuba ibangela isifo esiqatha ebantwini, kodwa ichongiwe njengeyona nto ibangela isifo okanye isifo sokuphefumla esisentloko, kubandakanya umkhuhlane oqhelekileyo. Ukuphindaphindiweyo kusulelo ebantwini kuxhaphakile ngaphakathi nangaphaya kwi-serotype, bebonisa ukuba ukuphendula komzimba kusulelo lwe-coronavirus ebantwini akunakuphela okanye kubomi obufutshane. "
Kodwa ngoku ngesiquphe intsholongwane esongela ilizwe. Ke ngoko kukho ezahlukeneyo ezahlukeneyo zentsholongwane ye-corona, kubonakala ngathi. Umntu ke kufuneka acacelwe kancinci xa ethetha ngentsholongwane ye-corona. Ipatent obhekisa kuyo ichazwa ngokucacileyo njengeyona nto siyaziyo njenge-SARS:
“Ichaziwe njenge-virus ye-corona yabantu eyenzelwe yona yodwa (i-SARS-CoV), i-arhente ebangelwa sisifo sokuphefumla kakhulu (SARS). Ukwabonelela ngokulandelelana kwe-nucleic acid ye-SARS-CoV genome kunye nokulandelelana kwe-amino acid kwe-SARS-CoV iifreyimu zokufunda ezivulekileyo, kunye neendlela okanye ukusebenzisa ezi molekyuli ukubona i-SARS-CoV kunye nokufumanisa usulelo. Iinyanzelo zokunyanzela ukungasebenzi ngokwasemzimbeni zinikezelwe, kunye neendlela zokusetyenziswa. "
24 Januwari 2020 kwi-00: 00
Isisongelo semfazwe yemvelo (isongelo ???)
Imizuzu ye-30 edlulileyo
24 Januwari 2020 kwi-01: 29
Ayilungele ababukeli abancinci
24 Januwari 2020 kwi-01: 38
Ngaba ubhekisa kwi-transgender newsreader ezimfusa ukusuka kwimizuzu eyi-0: 45? Oko kungaba lucalulo ..
24 Januwari 2020 kwi-01: 33
Ngethamsanqa sonke silungiselele kakuhle, wonke umntu wayesazi ukuba le nto iyeza. Sikubonile konke kwi-Netflix kunye nezithixo zethu zonke zafumana umpu kwaye bahlala ngolonwabo njalo emva.
hennag wabhala wathi:
24 Januwari 2020 kwi-12: 52
Ewe ndicinga i-biowarfare, naka ingqalelo ixesha: ngaphambi nje koNyaka oMtsha waseTshayina, owaziwa ngokuhamba kakhulu.
Intshukumo elungileyo yokuphazamisa iChina ngale ngxaki, kuba amajoni awasenakuthunyelwa nje.
dlala impuku wabhala wathi:
24 Januwari 2020 kwi-13: 12
Kwi-Isla Nublar, isiqithi esingaselunxwemeni lweCosta Rica, ibhiliyonire uJohn Hammond uye wanomxholo kunye nepaki yezilwanyana eyakhelwe izilwanyana zokuqala, ezibizwa ngokuba yiJurassic Park. Ngoncedo lwenzululwazi eliqela, uphumelele ekubumbeni idayinaso, ngoku afuna ukubonisa esidlangalaleni njengomtsalane wabakhenkethi.
24 Januwari 2020 kwi-14: 57
24 Januwari 2020 kwi-22: 07
Ifunyenwe kabukhali, ithuba alikho.
24 Januwari 2020 kwi-17: 03
Akuveli kwelebhu yesiNgesi, kodwa kwilebhu yaseTshayina ... bayangena kwi-UK ... njengenani lepatent
24 Januwari 2020 kwi-17: 16
Zange kube kudala abantu bathatha ezitratweni ezikufutshane neWuhan. Iingxaki ngenkunkuma njl .nje akunzima kakhulu ukuvala ityala kwaye sithi unobangela ziimeko ezimbi zempilo.
Amawakawaka aqhankqalaza kumbindi waseChina malunga nokutshiswa kwenkunkuma
Amawaka abantu athabathe izitalato kumbindi weChina ngoLwesine ebusuku ngolwesixhenxe okanye uqhanqalazo olunxamnye nokwakhiwa kwesakhiwo sokutshisa inkunkuma.
AmaProtestanti aphatha iibhanti kwaye emana edlula ngokuchasene nomzi-mveliso wamdaka onamandla owawakhiwa kufutshane neendawo zokuhlala eYangluo, kufutshane neWuhan, ikomkhulu lephondo laseHubei.
Abahlali bacatshukiswa zizicwangciso zokwakha indawo yokulahla inkunkuma eyayilindelwe ukuba iguqulwe ibe yipaki yoluntu.
Bakhwaza iigrank ezinje ngegama elithi "Sibuyisele intaba eluhlaza kunye namanzi acacileyo" kunye "Nesityalo esivutha inkunkuma siphulukana neYangluo".
24 Januwari 2020 kwi-19: 05
Ukugonywa kokugonywa kweTshayina kuyaqhubeka nezohlwayo ezikhulu ezicetywayo kwiinkampani ezinoburhabaxa
Ngu-Angus Liu | Epreli 22, 2019 12:19 pm
Ii-Inshurensi ze-Blue Cross ukwenza iNkampani yazo yeZiyobisi phakathi kweMfazwe yokulwa
Ii-inshurensi zezempilo ze-Blue Cross kunye ne-Blue Shield ziphehlelela inkampani yazo yeziyobisi engenzi nzuzo ngeCivica Rx ukwenza ezinye iindlela zemiyalelo ebiza imali eninzi engafikanga ngexabiso.
https://www.forbes.com/sites/brucejapsen/2020/01/23/blue-cross-insurers-to-create-their-own-drug-company-amid-price-fight/#21b378997a42 [Qaphela i-CitizicaRx]
Oct. 24 Ngo-2019-ogqirha balungiselela iyeza lokugonyela umkhuhlane lonyaka njengoko utshintsho olwenziwe ngobunjalo lukhokelele ubuncinci kumenzi omkhulu wokuhambisa unikezo kamva.
24 Januwari 2020 kwi-19: 10
ZI-70 Iipesenti ze-FLU ZEZITHUTHA EZIKHULULIWE NGONYAKA, NGOKUGQIBELA I-CDC
NGU-K THOR JENSEN nge-9/5/19 NGO-1: 52 PM EDT
24 Januwari 2020 kwi-19: 47
Umnyhadala wowokuGqibela ubhubhane weSifo sePisidi: Amagqabantshintshi nge Reel
• Novemba 4 Ngo-2019
24 Januwari 2020 kwi-19: 50
I-CHS efanayo, kakuhle kusebenza kakuhle
Iindaba ze-BBC zehlabathi | Ukuqhambuka kwentsholongwane eTshayina
24 Januwari 2020 kwi-20: 38
iposwe apha izihlandlo ezininzi kwindawo, kodwa ndacinga ukuba ndiza kuthumela kwakhona isiqinisekiso.
Isifo seNtsholongwane seCoronavirus UkuGqibela iinyanga ezi-3 ze-Ago Izibalo ezingama-65 ezigidi zabantu banokufa
Iprofayile yomsebenzisi uTyler Durden
24 Januwari 2020 kwi-20: 46
NIGHTINGALE ubone umxholo wonyaka we-Economist magazine 2020
UMBUTHO WEZEMPILO WEZEMPILO emhlabeni jikelele uchonge unyaka ka-2020 njengo "Minyaka kaMongikazi", ephawula iminyaka engama-200 emva kokuzalwa kukaFlorence Nightingale,
Iya kuhanjiswa NGOKUXELWA, ecwangcisiweyo.
24 Januwari 2020 kwi-20: 48
I-MARS yi-ASIA RESPIRATORY SYNDROME
24 Januwari 2020 kwi-20: 57
IMacau yindawo ekhethekileyo yolawulo yeRiphabliki yaseTshayina. (Jonga iflegi)
Ukuqinisekiswa, jonga ucingo oluvaliweyo
24 Januwari 2020 kwi-21: 12
Iapile iyawa, ikhowudi "Yonga abantwana"
24 Januwari 2020 kwi-21: 45
@Riffian, ndicinga ukuba waphule ikhowudi i-apple eyekayo yaboniswa Q = Ukuqinisekiswa
25 Januwari 2020 kwi-12: 35
np Salmon, ebuyela kuleyo ngcingo ibiyelwe kunye ne-lotus: ungazibona zombini kwisicangca esikhutshiweyo ukukhutshwa kwemagazini yeRothschild njengoko iposwe nguHlahlela. Kanye ngengozi, kabini ngesehlo, kathathu ngomthetho
25 Januwari 2020 kwi-13: 39
@riffian, ndiyasiqonda isizathu sokuba basebenzise lotus. Sibona ukunyuka komchasi-Kristu (inkqubo yezilo) ngokweskripthi nangokuya ngokulandelelana kwe-I Pet Goat II
Uya kulawula eYerusalem kangangeminyaka esi-7 (G)
Ukuvuswa kweentyatyambo zemihla ngemihla yeLusus ngokuqinisekileyo kunomdla, kwaye ngokuqinisekileyo ngumfuziselo okanye ukuvuselela. (Oku kuyenza ukuba ibe sisipho esifanelekileyo kuye nakuphina umntu ophulukene nokwenzakala okanye amava abuhlungu.) Kodwa intyatyambo inomdla wokuphila. Imbewu ye-lotus inyamezela amawaka eminyaka ngaphandle kwamanzi, iyakwazi ukumila kwiinkulungwane ezimbini kamva.
Intyatyambo ikwatyatyamba kwezona ndawo zingathandekiyo njengeendawo ezinodaka okanye amanzi omlambo omdaka eOstreliya okanye kuMazantsi eAsia. Ayifumeneli nje indawo engcwele kwi-muck, kodwa ngenxa yesikhuselo se-waxy kwizilwanyana zayo, ubuhle bayo abuphazamiseki xa iphinda ibhloka rhoqo kusasa. Iyaqhubeka nokuzivusa, ibuya ngobuhle njengoko yabonwayo okokugqibela. Ngokwala okunjalo ukwamkela ukwahlulwa, phantse akunakwenzeka ukuba ungadibanisi le ntyatyambo kunye nokholo olungagungqiyo.
25 Januwari 2020 kwi-10: 38
Lonke ulwazi oluthumele apha kwizimvo lubonakala lunomdla, nge-Matshi KUTHENI KUFANELEKILE ukuba izitofu ngokucacileyo zibonakala zidlala indima ekwenzeni i-hermapordite yolutsha.
Ndiphinda okomzuzwana: zonke iikhonkco ezinqamlezileyo zibonisa ukuba izitofu zinento yokwenza nokwaziwa kwesini. Isitofu sokugonya esikhula kwimpazamo yamadoda iqulethe i-chromosome ye-XY. Ukuba uthe wafaka intombazana (iX chromosome), emva koko ufumana into oyenzayo yokuhambisa abantu kwinkqubo yenguqu.
NDIYATHETHA UKUBA KUFUNA IQHAWU LOKUGQIBELA >> YAYE LONTO YONKE LE nto
Wonke umntu kufuneka agonywe kuba wonke umntu kufuneka eguqulwe waba ngumfanekiso kaLusifa: hermaphrodite, bisexual, ngokwesini. Yiyo ke le LGBTI
Kutheni le nto u-Erica Brighton angathiya iprotonin esekwe kwintsholongwane ye-corona emva kwesiphumo sokwabelana ngesondo okwenzeka kwiintsana ze-IVF? Kutheni le nto uninzi lwamalungu eqela (ebandakanyeka ekwakheni intsholongwane ye-corona ngokuchasene ne-bronchitis enkukhu) enomdla wokuchazwa kwesini?
25 Januwari 2020 kwi-11: 20
Ndicinga ukuba olu setyenziso lubanzi ngolwahlulo oluhlukeneyo:
-Izobupolitika ze-geo: Inzondelelo phakathi kwezempuma nentshona
- Uqoqosho: ukuthoba imo yezoqoqosho
-Ukulungiswa kwe-5G, ixesha lokwenyani lonxibelelwano ngokusisigxina ngokugonyela (i-nano particrate) yibize ngokuba yiHive Mind / iNethiwekhi eyintloko
Inqanaba lokudlula kobuntu, ukuhlangana kwehlabathi ngaphandle kwesini kunye ne-AI.
I-logoberger Schippers yavuya kakhulu ukuba ifune loo database ye-DNA, ngoba?
25 Januwari 2020 kwi-11: 26
Ngokuqinisekileyo ugonyo luyimfuneko ukunika abantu i-enzyme eyenza i-CRISPR-CAS12 inokwenzeka. Ummeli CRISPR-CAS! @ Urhulumente unokuyihlengahlengisa i-DNA yomntu ngamnye nangaliphi na ixesha. Oku kufuna ukuba bandwidth yanele kwaye inethiwekhi ye-5G ibaluleke kakhulu kwakhona. Kwaye ngoko ke ngokuqinisekileyo i-DNA yomntu wonke kufuneka ibhaliswe.
25 Januwari 2020 kwi-11: 51
Ndiyavuya kuba kusekho abantu abacinga kancinci kwaye babone unxibelelwano, njenge-9/11, oku kunokuba yimeko efanelekileyo yokwazisa izinto ezimbalwa.
Ingqondo yabasolwa abaqhelekileyo iyaziwa.
Le festile yethuba lethuba, apho umhlaba unokulungelelana ngokuthula kunye nokuxhomekeka kwelinye ilizwe, awuyi kuvulelwa ixesha elide - Sisekupheleni kwenguqu yehlabathi. Konke esikufunayo yingxaki enkulu kwaye izizwe ziya kwamkela i-New World Order.
25 Januwari 2020 kwi-12: 04
Mhlawumbi ndinike umbono wokuba andonwabanga ngazo zonke izimvo. Ndikho: zininzi ndiyabulela ngaloo nto!
Ndifuna nje ukuqaqambisa kwaye ndigxininise loo nqaku linye kwinqaku.
ben wabhala wathi:
25 Januwari 2020 kwi-13: 00
intsholongwane ye-corona 0:12:05 - 0:19:15
Isixeko saseWuhan, idolophu enkulu yaseHubei, kulindeleke ukuba sibe nezikhululo ezisisiseko ezili-10,000 5G ekupheleni kuka-2019
25 Januwari 2020 kwi-13: 01
Ukubanjwa kokuqala malunga nokuqhambuka okwenziwe eCanada:
Inzululwazi yaseburhulumenteni waseCanada ephantsi kovavanyo lwabasebenzi abaqeqeshiweyo kwinqanaba le-4 lab e China
Okwangoku akukho zimpendulo kuphando lwenzululwazi zikarhulumente kwiLebhu yeMicrobiology yeLizwe eWinnipeg
Unjingalwazi wase-Canada osisazinzulu kwi-National Microbiology Lab e-Winnipeg uthathe uhambo oluncinci ezintlanu waya e-China ngo-2017-18, kubandakanya enye yokuqeqesha inzululwazi kunye noochwephesha kwilebhu yase-China esandula yaqinisekiswa, esenza uphando nge pathogens ezibulala kakhulu, ngokokuhamba. amaxwebhu afunyenwe yi-CBC News.
U-Xiangguo Qiu - owakhutshwa kwi-Winnipeg lab ngoJulayi naphambi kophando lwe-RCMP malunga nokuchazwa yi-Arhente yezeMpilo yaseKhanada "njengephule umgaqo-nkqubo" -amenyelwa kwiWebhu yeLizwe leLizwe le-Biosafety yase-China. Inzululwazi kabini ngonyaka iminyaka emibini, ukuya kwiiveki ezimbini ngexesha ngalinye.
"Oku kuzakuxhaswa ngemali ngumntu wesithathu, kwaye ke akukho ntlawulo [kwiArhente yezeMpilo yoLuntu yaseCanada]," utsho amaxwebhu, afunyanwa ngokufikelela kulwazi lwezicelo. Isazisi somntu wesithathu sahlelwa.
Ngexesha le-Sep. Nge-19-30, i-2017, uhambo, naye kunye nabadibeneyo eBeijing, amaxwebhu athi, kodwa amagama abo amnyama-mnyama.
25 Januwari 2020 kwi-15: 23
Ke oko kuyakhawuleza, ukufa komnye kusisonka somnye. Urhwebo lwangaphakathi lucinga 😈👹
I-Co-Diagnostics stock phantse phantse ezintathu emva kokugqitywa komsebenzi wokuyila kwesikrini se-corona virus
-8: 11 AM ET 01/23/2020
Izabelo zeCo-Diagnostics Inc. (CODX) iphantse yaphindaphindeka kathathu (inyuke nge-177%) kumthamo omkhulu kurhwebo lwangaphambi kolwesine, emva kokuba inkampani yokuxilonga imolekyulu ithe yagqiba umsebenzi wokuyila komgaqo wovavanyo lwe-polymerase chain reaction (PCR) yovavanyo lwe-coronavirus entsha.
25 Januwari 2020 kwi-21: 42
Kuyaphawuleka ukuba ibango / ubuchule bokwenza uxilongo lwegazi ngethontsi elincinci legazi kwa-Theranos, inkampani kaElizabeth Holmes, ngephanyazo baphinde bavela ngonyaka ka-2019. Jonga ngokukodwa ukuba yayingabantu abebengamalungu ebhodi yale nkampani, anje ngala:
UGeorge Shultz, owayengunobhala welizwe lase-US
UGary Roughead, umphathi-mkhosi waseNavy othathe umhlala-phantsi
UWilliam Perry, owayengunobhala wezomkhosi wase-US
USam Nunn, owayesakuba ngusekela-senkundla wase-US
U-James Mattis, u-Marine Corps waseMelika odla umhlala-phantsi noqhele ukusebenza njenge-ofisi kaMongameli uDonald Trump
URichard Kovacevich, umphathi wangaphambili we-Wells Fargo
UHenry Kissinger, owayengunobhala welizwe lase-US
UWilliam Frist, ugqirha wentliziyo kunye nemiphunga yokufakelwa komnye umntu owayengusenator
UWilliam H. Foege, owayesakuba ngumphathi weziko lokuLawulwa kwezifo nokuThintela
URiley P. Bechtel, usihlalo webhodi yeBechch Group Inc. ngeloxesha.
UToshiba wenza amabango afanayo ekupheleni konyaka ka-2019, kungakuhle ke nangokugcina iso kwixabiso kunye namavolumu ale nkampani.
25 Januwari 2020 kwi-22: 36
Ngaphezu kweminyaka emi-2 eyadlulayo ndibhale olu luvo kwaye ndibona ukuba ngubani ngoku onokufaka izimvo ngalo bhubhani u-Appie Osterhaus
Ngokutsho kwengcali yeentsholongwane u-Ab Osterhaus ayimfuneko ngoku. "Nangona kunjalo, imeko kufuneka ibekwe iliso ngononophelo kwaye kunjalo kuhlala kusenzeka ukuba inyuke."
25 Januwari 2020 kwi-22: 38
25 Januwari 2020 kwi-23: 11
Kubonakala ngathi indlela yeCRISP-CAS12, ebonelela ngokukhangela kunye nokutshintsha ukusebenza kwayo, yenza ukuba kube lula ukukhubaza intsholongwane. Isisombululo kubonakala ngathi sele sikhona, kodwa ubhubhane ofanelekileyo uluncedo ekufumaneni uluntu lwehlabathi ukuba lufumane ugonyo olunyanzelekileyo ngomthetho 'Wengxaki, Ukuphendula, Isisombululo' (apho udala ingxaki yempembelelo enkulu, uloyiko lwabantu abaninzi betha kwaye emva koko unike isisombululo abaya kuthi basamkele ngaphandle kokucingisisa).
Funda eli nqaku Ukufumanisa ukuba zenziwa njani izinto kwaye ubukele le ngxelo ingezantsi:
Ukujonga usulelo oluqhubekekayo lwentsholongwane.Ukuthintela usulelo lokuqala, uninzi lweentsholongwane luqala usulelo oluqhubekayo ngokudibanisa ulwazelelelo lwazo kwiDNA ye-chromosomal yeDNA okanye ngokulugcina ngaphakathi kweeseli ezikhoyo. Iintsholongwane ezibangela ukuba usulelo olungapheliyo lubandakanye kodwa kungaphelelwanga kwi-HIV, intsholongwane ye-hepatitis, intsholongwane ye-herpes, kunye ne-papillomaviruses. Kwiminyaka yakutshanje, itekhnoloji yeCRISPR isetyenziselwe ukunciphisa okanye ukuphelisa usuleleko lwentsholongwane oluqhubekayo kwi-vitro nakwimodeli yezilwanyana, ukuphakamisa ithemba elitsha kunyango losulelo lwasentshonalanga nolungapheliyo.
Ukulandela ukosuleleka yintsholongwane kaGawulayo, i-protiral DNA idityaniswa kwiiseli ezisingatha, oko kukhokelela kusulelo olungapheliyo nangona unyango lwe-antiretroviral. Izicelo ze-in vitro okanye itekhnoloji yeCRISPR isetyenziselwe ukuthintela okanye ukuphelisa usulelo lwe-HIV. Uthintelo losuleleko lwe-HIV-1 kusulelo lwe-TZM-b9 iiseli ezibonisa i-gRNA-Cas51 yokwakha ekujolise kuyo ukuphindaphindeka kwesiphelo se-HIV (i-IRR) ukulandelelana kwe-HIV (52). Ngolu lwakhiwo, ababhali bakwazile ukubonakalisa uhlobo lwentsholongwane kaGawulayo kwiiseli ze-microglial zeseli kunye neeseli T. Kusetyenziselwa okufanayo ekujoliseni i-HIV i-LTR, i-gag, kunye ne-env gene kusetyenziswa ekupheliseni i-HIV yokuvuselela i-HIV kweminye imizila emininzi yeseli (XNUMX).
U-Yin et al. Uphelise i-HIV yokuvuselela i-HIV kwiiseli ze-neural progenitor isebenzisa ii-sgRNAs ezininzi kunye ne-aureus Cas9 eziswe yintsholongwane ehambelana ne-adeno (AAV) (53). Lo msebenzi wandiswa waba yimodeli yethambo lomntu / isibindi / i-thymus okanye usulelo olungapheliyo lwe-HIV, apho kuye kwafunyanwa i-quadruplex sgRNA-S. Inkqubo ye-aureus Cas9 ipakishwe kwi-veki ye-AAV eyayilawulwa ngokufakwa ngaphakathi kwe-DNA evela kwizilonda zamaphaphu, imiphunga, intliziyo, ikholoni kunye nezicubu zobuchopho (53). Kumsebenzi ofanayo, uBella et al. Wasebenzisa itekhnoloji yeCRISPR evezwa ngumnxibelelanisi we-lentivirus ukushenxisa i-HIV ye-HIV kwi-cell mononuclear ye-HIV eyosulelekileyo kwimodeli yegundane ye-transgenic (54).
Ezifanayo kwizicelo ze-HIV, i-CRISPR isetyenziselwe ukunqanda nokususa usulelo lwe-herpes simplex 1 (HSV-1) kwi-vitro. van Diemen et al. sisebenzisa ii-gRNA ezijolise kwiintlobo ezahlukeneyo ezili-12 ezahlukeneyo kunye ne-2 yemfuza engabalulekanga ukunciphisa ukuphindaphinda okanye i-HSV-1 kwiiseli zeVero. Into ebangela umdla kukuba ukujolisa okanye iintlobo ezininzi ngaxeshanye kukusebenza ngakumbi okanye ukucaciswa kwe-HSV-1, xa kuthelekiswa nokujolisa okanye uhlobo olunye (55). I-Roehm et al. Inqumle usulelo lwe-HSV-1 kwaye yacinezela ukuphindaphinda kwentsholongwane kwiiseli zabantu ze-oligodendroglioma zisebenzisa inkqubo yeCRISPR-Cas9 yokuhambisa iithagethi zemveli ezibalulekileyo kuphindaphindo lwentsholongwane (56). Ezinye iintsholongwane ze-herpes eziye zajoliswa kwi-CRISPR in vitro zibandakanya intsholongwane ka-Epstein-Barr (EBV), echaza umntu ukuba athathe ii-lymphomas ezithile kunye nomhlaza wesibeleko, kunye ne-cytomegalovirus (CMV) yesifo, ebangela isifo esibi xa ifunyenwe i-congenitally okanye ngumkhosi we-immunocompromised. U-van Diemen et al. wasebenzisa i-vet ye-lentivirus ukuhambisa inkqubo yeCRISPR-Cas9 kunye nee-gRNA ezimbini ezijolise kwi-EBV yenyukliya antigen 1 (EBNA-1), iphumelela ukucaciswa kwe-95% ye-EBV genomes kwiiseli ezasulelekileyo ezasuleleka yiBurkitt lymphoma cell (55). Ezi ziphumo zivelisa amathuba okuba unyango olusekwe kwi-CRISPR ngenye imini lungasetyenziswa ekupheliseni usulelo oluqhubekayo lwe-EBV kwizicubu kunye nokuthintela ukukhula kwezifo ezinxulumene ne-EBV. Ababhali basebenzise ii-gRNA ezibalulekile nezingabalulekanga ezijolise ekuphindaphindweni kweCMV kwaye baqwalasele ukuba izakhi zofuzo eziyimfuneko zinciphise ukuphindaphinda, ngelixa ukujolisa okanye uhlobo olungabalulekanga alunampembelelo, ngaphandle kokuhlelwa ngokuchanekileyo kweCas-9. Okanye uqaphele, nangona, ngelixa ii-gRNA ezininzi zikhokelwa kukunyanzelwa kwe-CMV ukuya kwiintsuku ezili-11, i-mutants ye-virus yokubaleka ivelile, ibalaselisa imiceli mngeni enokubakho kunyango olusekwe kwi-CRISPR (55).
Bangaphezu kwezigidi ezingama-250 abantu abosulelwa yi-HBV kwihlabathi liphela, kukhokelela ekufeni kwabantu abangama-887,000 ngonyaka (57). Ngelixa isitofu sokugonya esisebenzayo se-HBV sikhona, unyango alusaziwa. U-Li et al. Wasebenzisa i-CRISPR-Cas9 ukususa isiqwenga se-DNA sobude obu-3,175-bp ye-HBV eyayidityaniswa ngokwechromosomally kwaye ibekwe episomally kwiiseli ezosulelwe sisifo esinganyangekiyo (58), sonyusa amandla okupheliswa kweHBV. UScott et al. Wasebenzisa iVVA enye ene-strange enamacala amabini ukuhambisa i-sgRNA ejolise kwisiseko sokufunda okuvulekileyo kwe-HBV kunye no-S. aureus Cas9. Ngale nkqubo, basebenze ngokudibeneyo bavale isangqa i-DNA (cccDNA) okanye i-HBV eyosulelwe yi-hNTCP-HepG2 iiseli (59). Intsholongwane ye-JC (JCV) kunye ne-HPV nayo ijolise kwi-vitro isebenzisa itekhnoloji yeCRISPR. U-Wollebo et al. Usebenzise inkqubo yeCRISPR-Cas9 ene-gRNA ejolise kwi-antigen yeJCV T. Usebenzisa i-vet ye-lentivirus enesidalwa esine-do9cycline-inducible, ababhali batshintshela iiseli ze-HJC-2 kwaye bayiphelisa ngempumelelo i-T-antigen expression (60). UKennedy et al. Kujolise kwi-HPV-16 kunye ne-HPV-18 ene-gRNA ngokuchasene ne-E6 kunye ne-E7 oncogene ngokudibeneyo neCRISPR-Cas9, ukuyenza la maonococo kwiiseli eziguqulweyo ze-HPV (61). Into ebangela umdla kukuba, i-E6 inactivation ikhokelele ekunyuseni kwembonakalo ye-p53, ngelixa i-inactivation okanye i-E7 yaxelwa kwangaphambili kwisenzi esonyuswe, isiphumo ngasinye sakhokelela ekufeni kweseli kunye nokubonisa indima enokubakho kunyango okanye isifo se-HPV esihambelana ne-HPV.
25 Januwari 2020 kwi-23: 30
Nceda uqaphele: inkcazo isusela ngoDisemba ka-2018, njengeziphumo zophando eziboniswe kuphando, endayibeka inxalenye yesicatshulwa. Ngaphezulu konyaka, kuya kulindeleka ukuba ezi zinto sele zikho eshalofini ukuze zingapheleli ekupheliseni intsholongwane (kwi-Intanethi, ukuba nje abantu bagonyelwe i-enzyme eyenza CRISPR-CAS12), kodwa nokulungelelanisa ezinye izinto kwi-genome yethu. (Isisombululo).
25 Januwari 2020 kwi-23: 43
Kwincwadi yam ndicacisa indlela i-DARPA esele isebenza ngayo ukunika amajoni okufunda nokubhala ukusebenza ukuze bakwazi ukusinda ngokulula kuhlaselo lwebhayoloji kunye nemichiza. Kubalulekile ukuhlala uyithenga loo ncwadi kwaye uyifunda ngononophelo.
26 Januwari 2020 kwi-03: 56
Ewe konke kuyahambelana nomfanekiso wokunciphisa inani lilonke lehlabathi ukuya kwi-500 yezigidi. Kwelinye icala, ukunciphisa ngokuthe ngqo kwixesha elifutshane ngenani lokufa, kwaye kwixesha elide ngokusebenzisa, yithi, ulawulo lokuzalwa olusekwe kwi-ajenda. Nangoku ngoku ukubhengeza ukuba kuya kubakho ukunqongophala kwezithuba zogonyo olufanelekileyo ngokugqibeleleyo kulo mfanekiso, kuba ngubani oya kuzincama ... ewe uninzi lwabemi. Xa eli candelo lincipha ngokukhawuleza kwinani ngokukhawuleza kunokuba bekulindelwe, oku kusombulula ingxaki yamatyala oluntu angabizi mali (njengeepenshoni, ukhathalelo lwempilo) kunye nokunqongophala kwezindlu emhlabeni kuya kuba yinto encinci. Sinokubona oku njengento ebizwa ngokuba "ukuseta" kwakhona kwenkqubo iphela.
28 Januwari 2020 kwi-12: 31
Ngoku uCheckt uzama ukuzama ukutshisa uMartin Vrijland ngebali elibuthathaka (jonga uhlaziyo kwinqaku elingasentla):
« Ulutsha lwanamhlanje lufuna ukuzalisa iinkampu zokufunda kwakhona (i-gulags) ngabahambi bemozulu
ECanada: UTshayina uGqr. I-Xiangguo Qiu kunye neWuhan yintsholongwane yokulwa imfazwe ukuze iChina ixhomekeke kwiChina kwisisombululo »
Iindwendwe ezipheleleyo: 42.699
Intsholongwane kaCorona, ukunqunyulwa okufutshane ekuphelisweni kwemali kunye nefuthe lezoqoqosho kwihlabathi liphela
UMartin Vrijland op Ngaba u-André Hazes waphula ngenxa yokuba uBridget Maasland wayekopela kuMartin Vrijland?
ellie op Ngaba u-André Hazes waphula ngenxa yokuba uBridget Maasland wayekopela kuMartin Vrijland?
Ikhamera 2 op Ukuvukela okuphelileyo kunye nokubiza iirhafu eziphezulu kunye nolawulo olupheleleyo kuzo zonke iinkcukacha zobomi bakho
Ikhamera 2 op Ngaba u-André Hazes waphula ngenxa yokuba uBridget Maasland wayekopela kuMartin Vrijland?
UMartin Vrijland op Iibhombu zaseRussia zitshabalalisa iinqwelomoya zaseTurkey, eSyria